ညစာစားဖို့အကြံဥာဏ်ကောင်း ၅ ချက် | Bezzia
တောရက်စ် | 10/05/2021 16:00 | ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ
ဒီညစာစားဖို့စိတ်ကူးထားတာနဲ့အတူအိပ်စက်အနားယူပြီးကျန်းမာတဲ့အိပ်စက်အနားယူပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညံ့ဖျင်းစွာအိပ်စက်ခြင်းကသင့်ကိုအဆီဖြစ်စေတယ်၊ ​​သင့်စိတ်ကိုထိခိုက်စေတယ်၊ ညံ့ဖျင်းစွာအိပ်စက်ခြင်းသည်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ကိုမမေ့ပါနှင့် ထိုကဲ့သို့သောဆီးချိုရောဂါ, သွေးတိုးရောဂါသို့မဟုတ်နှလုံးပြproblemsနာများအဖြစ်ရောဂါဗေဒအခြားသူများများထဲတွင်။
ညအချိန်တွင်သင်စားသောအရာသည်သင်၏အနားယူမှုကိုတိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးသည်၊ ထို့ကြောင့်ညစာအချိန်၌သင်စားသောအစားအစာများကိုကောင်းစွာရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အစားအစာပမာဏကိုလျှော့ချရန်မှာအရေးကြီးသည်သို့မဟုတ်အိပ်ရာမဝင်ခင်နာရီအနည်းငယ်ကြာညစာစားပါ။ သင်ညစာအတွက်သင်ရွေးချယ်သောအရာကိုလည်းအာရုံစိုက်ရပါမည် ပိုကောင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုကူညီပါ.
အချို့သောအစားအစာများကိုညအချိန်တွင်သောက်ရန်မတိုက်တွန်းပါ။ ဥပမာအစာကြေစေရန်ခက်ခဲစေသည့်အတွက်စိတ်ကြွဆေးရှိသူများသို့မဟုတ်အဆီသိပ်များလွန်းသောအစားအစာများဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်သူတို့၏အစိတ်အပိုင်းများကြောင့်အစားအစာများလည်းရှိသည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသင့်ကိုပိုကောင်းအောင်အိပ်ဖို့ကူညီပေးလို့ပါ။ ဤအရာသည်ညအချိန်၌စားသုံးရန်အကောင်းဆုံးသောအစားအစာများဖြစ်သည်။
ကြက်ဥကြက်ဥ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ tryptophan ဖြစ်သည်။ တစ်သက်သာစေပစ္စည်းဥစ္စာ အဲဒါကအိပ်စက်ခြင်းကိုအားပေးတယ်။
နို့: မဂ္ဂနီစီယမ်၊ ဗီတာမင် B6 သို့မဟုတ် tryptophan သည်နို့တွင်သဘာဝပါ ၀ င်သောအရာများဖြစ်သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဖြစ်ကြသည် ညအချိန်တွင်သောက်ရန်စုံလင်သည် သူတို့သက်သာစေလို့ပဲ
အပြာရောင်ငါးအိုမီဂါ3ဖက်တီးအက်စစ်များကဲ့သို့သောအဟာရများစွာအတွက်အဆီဓာတ်ငါးများ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်များပြားလှပါသည်။ သို့သော်ထို့အပြင်ဤငါးအမျိုးအစားများပါ ၀ င်သည် ဆယ်လီနီယမ်, စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချကူညီပေးသည်, ထိုဖျောပွ tryptophan နှင့် selenium ။ ဤအရာဝတ္ထုများသည်မယ်လတိုနင်ကိုထုတ်လွှတ်ပြီးနှိုးဆွမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
ငှက်ပျောသီး- ငှက်ပျောသီးမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးပါဝင်တယ် မဂ္ဂနီစီယမ်၊ အဏုဇစ်မြစ်၊ ဆယ်လီနီယမ်သို့မဟုတ်ဗီတာမင် B6.
အမှီအသားညဘက်မှာစားဖို့အသင့်တော်ဆုံးအသားဖြစ်တယ်။ ပထမအကြောင်းမှာ အဆီနည်းပြီးအစာကြေရန်လွယ်ကူသည်သံဓာတ်၊ သွပ်နှင့်ဗီတာမင် B6 တို့ပါဝင်သည်။
အပန်းဖြေအနားယူရန်ညစာစားရန်ရွေးချယ်ခြင်း၊ အလွယ်တကူစားနိုင်သောအစားအစာများကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အိပ်ခြင်းမဝင်မီအရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အရေးကြီးသည်။ သင်စီးရန်လှုံ့ဆော်မှုလိုလျှင် ပိုကောင်းအိပ်ရန်နှင့်အတူအလင်းညစာစားဤအတွေးအခေါ်များကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူပြင်သစ် omeletteနှင့်အတူကျပ်တစ်ပြင်သစ် omelette ဟင်းနုနွယ်ရွက်ပင်ပေါက်, ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးနှင့် feta ဒိန်ခဲ.
ချိုမြိန်အာလူးကြော်နှင့်အတူကြက်သားရင်သားကင်ဆာမုန်ညင်းစေ့တစ်ဇွန်းနဲ့ပျားရည်နှစ်ခုကိုရောထွေးပြီးကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီးကြက်သားရင်သားကိုဖြန့်ပါ။ မိခင် ၂၀ မှ ၂၅ မိနစ်အထိမိခင်နို့ရည်ဖြင့်ချက်ပြုတ်သည်အထိဖုတ်ပါ။ အခွံနှင့် မွှေးသောအာလူးကိုအချပ်များခွဲကာဆား၊ ငရုတ်ကောင်းဖြန်းပါ နှင့်ဆီအနည်းငယ်။ ကြက်သားများချက်ပြုတ်နေစဉ် ၁၅ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပါ။
papillote en ဆော်လမွန်အာလူးအချပ်အချို့ကိုအလွန်ပါးလွှာသောအချပ်များ၊ အချို့သောမုန်လာဥနီနှင့် leek strips မ်ားထဲသို့ဖြတ်တောက်ပါ။ စက္ကူ၏စာအိတ်ကိုဖန်တီးရန်လူမီနီယံသတ္တုပါးတစ်ရွက်ကိုပြင်ဆင်ပါ။ ခြေရင်းတွင်အာလူးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ငါတို့မွှေးတဲ့ဝိုင်တစ်ခွက်ကိုလေပေါ်မှာပန်တယ် ပြီးတော့သံပုရာအချပ်တွေချလိုက်တယ်။ စာအိတ်ကိုကောင်းစွာပိတ်ပါ၊ သို့မှသာ၎င်းသည်လေလုံပြီးမိနစ် ၂၀ ဖုတ်ပါ။
ကြက်ဥ: အပျိုစင်သံလွင်ဆီနဲ့ကြက်သွန်ဖြူအလေးမွှေးလေးတစ်ထည်ကိုSautéလုပ်ပါ။ လှီးထားသောမှိုအချို့နှင့် Serrano ဝက်ပေါင်ခြောက်အချို့ထည့်ပါ။ ကြက်ဥနှစ်ခုကိုအတူတူဒယ်အိုးထဲထည့်ပြီးဇွန်းနဲ့ချိုးပါ သူတို့2သို့မဟုတ်3မိနစ်ချက်ပြုတ်နေစဉ်သစ်သား၏။
Aubergine Milanesas- ခရမ်းချဉ်သီးကိုအလွန်ထူသောအချပ်မရှိအောင်ဖြတ်ပါ၊ အချဉ်ဓာတ်ကိုဖယ်ရှားရန်မိနစ် ၃၀ ကြာအောင်ကြမ်းတမ်းသောဆားကိုအပေါ်သို့တင်ပါ။ Milanese ကိုမဖွဲ့စည်းမီစုပ်ယူနိုင်သောစက္ကူဖြင့်ဆေးပြီးခြောက်သွေ့ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးအချပ်တစ်ခုစီကိုဂျုံမှုန့်၊ မီးဖိုချောင်သုံးအိုးတစ်လုံးပေါ်တွင် ၁၅ မိနစ်ဖုတ်ရမည်။ တစ်ဇွန်းထည့်ပါ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်, ချက်ပြုတ်ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်အချပ်ဒိန်ခဲ။ ဒိန်ခဲအရည်ပျော်သည်အထိမြေပြင် oregano နှင့်ဖြန်းပြီးမီးဖိုသို့ပြန်သွားပါ။
ဤညစာစားချိန်ညှိထားသောစိတ်ကူးများဖြင့်သင်သည်အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်အာဟာရ၊ အရသာရှိပြီးကျန်းမာသောဟင်းလျာများရှိနိုင်သည်။ အရသာရှိတဲ့ကိုက်တာကိုမယူဘဲနဲ့၊ သငျသညျပိုမိုကောင်းမွန်အလင်းနှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေအိပ်ပျော်ခံစားနိုင်ပါတယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ » ပိုကောင်းတဲ့အိပ်ဖို့ညစာ5စိတ်ကူးများ